के सरकार नै गलत हो
के सरकार नै गलत हो ? किन जो पनि असफल ?
“यो सरकार काम छैन” “यो सरकारले केहि गर्न सकेन” “विदेशको जस्तो सरकार पो सरकार, यस्तो नि सरकार” “यो देशमा केहि हुंदैन, के गर्ने सरकार नै यस्तो छ”
यि माथिका कथन प्राय सुनिन्छन हाम्रो वरिपरी । के हामीले कहिले गहन तरिकाले सोचेका छौं सरकार भनेको के हो ? सरकार को हो ? सरकारको कार्य सम्पादन र सम्पन्न कसरी हुन्छ ?
निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यस्त हाम्रो मानसिकतामा विकास अरुले गर्देला, सबै राम्रो बनाईदेला अनि आफुमा केहि परिवर्तन नै नल्याई सबै राम्रा सुविधा र व्यवस्था उपभोग गरौंला भन्ने बुझाई बाट उब्जिएको सोचले सरकारलाई परिभाषित गरिदिएको छ ।
राजाको पालामा, कांग्रेसको पालामा, कम्युनिष्टको पालामा, हरेकको शासनमा वा हरेकको पालामा कुनै सरकार काम लागेन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । सामान्य सोचाई । किन होला ? सरकार नै मात्र गलत हो त ?
एकैछिन मनन गरौ त, तपाईले गरेको राम्रो कामलाई सह्राना गर्ने वा तपाईको राम्रो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईको छरछिमेकमा कत्तिको सहज छ ? कतै तपाईले यस्तो पो सुन्नुहुन्छ कि ? “हेर्नुस सबैकुरा तपाईलाई थाहा हुदैन, धेरै जान्ने हुनु पर्दैन” “बिना स्वार्थ कसैले राम्रो काम गर्दैन” । हामी आफै पनि अरुको काम र मुल्यलाई कत्तिको विश्वास गर्छौ ? कि हामीले नजानेको र नबुझेको काम गर्नेले तोकेको मुल्य तिर्दा ठगिएको ठान्छौ ? अनि आफुबाहेक अरुलाई व्यवहारमा कति नराम्रो देख्छौं ? तर्क र सत्य थाहा नपाई अरुको बारेमा दृष्टिकोण बनाउने, कागले कान लगे नलगेको थाहै नपाई कागको पछि दगुर्ने र तार्किक परिक्षण नगर्ने वा गर्न नसक्ने अनि अरुलाई पनि विश्वास नगर्ने, यस्ता सोच र व्यवहार कत्तिको हावी छन् हाम्रो वरपर ? एकछिन मनन गर्नुहोस त ।
हरेक सरकार, हरेक व्यवस्थामा खोट लगाउने र हरेकलाई गाली गर्नु अघि यसो विचार पो गर्ने हो कि ? केहि दिन अघि केहि समय विदेश बसेर आउनु भएको एकजना आमाले मलाई भन्नुभयो । “यो देशका जनता ठिक हुनु प¥यो नि, सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ?” । यो प्रसंग विदेशको विकास र नेपालको अवस्थासंग जोडिएको थियो ।
सरकार के हो ? सरकार एउटा संयन्त्र हो जसले तर्क, सिद्दान्त र न्यायमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्छ र कर्मचारीतन्त्र मार्फत ति नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउंछ । त्यो कार्यान्वयन जनताका लागि हुन्छ । अब ती नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन र त्यसको सफलता त्यो नीति तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता अर्थात जनतामा नीहित हुन्छ । निस्वार्थ जनता वा भनौं राम्रो सोचको बाहुल्यता भएको समाजमा भ्रष्टाचार हुदैन र सरकारको काम सफल ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । तर जनतामा राम्रो सोचको अभाव र स्वार्थपुर्ण भावना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको व्यवहारमा पर्छ, त्यो विस्तार भएर जिल्ला स्तरीय नेताको कार्यशैली प्रभावित हुन्छ र विस्तार हुदैं राष्ट्रकै रोग बन्छ । नेताले जनतालाई नेतृत्व गर्छ तर खराब र तर्कहिन जमातले त्यस्तो नेता पाउन सक्दैन जो निस्वार्थ भएर अगाडि बढ्न सकोस ।
आफ्नो गांउ ठांउको मान्छे मन्त्री वा भनौ कुनै ठुलो ओहोदामा पुगेपछि हामी किन उन्मादमा आउछौ ? उनलाई उनको कार्यालय वा निवासमा भेटन जांदा सिफारिसको चाङमा लादिएर थकित अवस्थामा मन नलागी नलागी मान्छे भेटिरहेको पाउछौ ? “यो मेरो छोरो सारै सोझो छ लौन कतै जागिर लगाइदिनुप¥यो, मैले चुनावमा हजुरलाई गरेको सहयोग नबिर्सिनु होला”, “सानो गल्ति भएछ, मेरो आफ्नै मान्छे हो हजुर लौन यसो हेर्दिनुप¥यो” । प्रत्येक सिफारिसको तात्पर्य लगभग यहि हो लौन लौन गलतलाई सहि थाप्नुप¥यो । के यि कारणहरु होइनन् हाम्रो सरकारको असफलताको ?
अनि हामी आफै चिच्याउछौं, जताततै नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार ।
सहि कामको लागि संयन्त्र छ । समाधान छ सहि सोचले गर्ने सबै कामका लागि । मन्त्री अथवा जोसुकै होस कसैको अगाडी हाथ जोड्नु पर्दैन, यदि तपाई आफु इमान्दार भएर अगाडी बढ्नुहुन्छ भने ।
आफु बनेपछि देश आफै बन्छ । सक्षम र इमान्दार मान्छेको लागि नेपाल एक सुन्दर राष्ट्र हो जहां उसले अवसरको खानी देख्छ ।